Sarudzo yakanakisa yenhau dzakaitika
Nhoroondo dzekare dzinoongorora
Mabhuku matatu akanakisa naLuis Zueco
Ndakasangana naLuis Zueco pane torrid uye Zaragoza 23 Kubvumbi makore mashoma apfuura. Vaverengi vane dzungu vakapfuura naPaseo Independencia pakati pemabhuku mazhinji akaratidzirwa paZuva raSaint George raipenya. Vamwe vakakumbira siginecha yehutsinye vamwe vachiona kubva kune rimwe divi kuitira ...
Rimwe zuva ndichasvika muSagres, naNélida Piñón
Semazuva ese mabhuku ekununura Nhoroondo. Hapana chingave chiri chekudzidza nezveedu zvakapfuura pasina kuongororwa kunodiwa kwemabhuku. Nekuti nhoroondo yekunyepedzera inodarika zvinyorwa zvinotsigira zviitiko nemisi yazvo yevatendi vakazvipira mumahofisi. Nélida Piñón anotipa ...
Mumaoko emunyori akaita Isabel Allende, nhau inobudirira iri basa rokusvika nguva yakapfuura yakazara nedzidziso. Kuti dzidziso idzodzo dzakakosha here kana kuti kwete, nekuti mukudzokorora zvikanganiso isu tinobudirira nekuramba. Asi hey ... Chimwe chinhu chakafanana chinoitika kune chero murondedzeri wenhoroondo ngano. Nekuti vaverengi vazhinji ...
Madonna mune Fur Coat naSabahattin Ali
Turkey ndiko kuwanikwa kukuru kwepasty dzakateedzana nguva dzichangopfuura. MaSouth America melodramas akapa nzira yezuva nezuva nyaya dzeanonyanya kuEurope Turkey. Kwete kuti ino novel iri kutenderera, asi pane chimwe chinhu chinokurudzira nezve rangano. Imwe nguva yakasiyana asi dambudziko rakafanana ...
The Awakening of Heresy, naRobert Harris
Iko kunogara kunouya nguva iyo yega yega murondedzeri wenhoroondo dzekunyepedzera anopedzisa kubata izvo zviripo zvinonakidza pamwe nekuwedzera kusahadzika nekuda kwenzvimbo yerima yenguva dziri kure. Robert Harris aisazove anosarudzika. Munharaunda umo kutenda nedzidziso dzakadzinga ...